TrueCaller, dzivisa kunetsa Spam kufona | IPhone nhau
TrueCaller, dzivisa kunetsa Spam kufona
Luis Padilla | | IPhone maapplication, Noticias
Ndiani asina kuneta nemafoni anotsamwisa kubva kune vanoshandisa nhare na4 masikati? Kana kuti izvo zvinokukanganisa iwe kana iwe uchinge wakanyanya kuisa basa rako kukupa iwe chigadzirwa chisingakufarire zvachose? Ichokwadi kuti iOS yakagara iine sarudzo yekuvharira vokukurukura, asi iwe unofanirwa kuziva nhamba yavo yefoni, izvo zvisingawanzo kuitika. TrueCaller anokuitira izvozvo, kwete chete kuzivisa iwo manhamba anoita foni nhare, asiwo kukubvumidza iwe kuvadzivisa zvakananga kuti vasazokunetsa zvakare. Icho chishandiso chinowanikwa cheApple neIOS, uye chiri chemahara, saka chinenge chinosungirwa kuyedza.
Iko kunyorera kunowanikwa muApp Store (uye muGoogle Play), kunyoreswa kwayo kuri mahara uye zvakare, kune avo vanokoshesa kuvanzika kwedata ravo, unogona kumisikidza iko kunyorera kuitira kuti vamwe vashandisi vazive kuti uri mukati. TrueCaller inoziva sei kuti ndeapi manhamba efoni ari kuita spam kufona? Iyo inounganidza data kubva kwakasiyana masosi, uyezve kubva kune vashandisi ivo pachavo. Chero ani anoshandisa iko kunyorera anogona kuudza nhamba nyowani yaita Spam kufona, uye kana iyo nhamba yakaziviswa nevashandisi vakakwana kuti vakwanise kusimbisa chirevo ichocho, inozoverengerwa mune yeSpam runyorwa.
Senge kuti yaive antivirus, TrueCaller inowedzeredzwa nguva nenguva nenhamba nyowani, uye muchiitiko chekuti chero mumwe wavo anokudana, kunyangwe kana vasina kumbokufonera uye usati wazviziva, ichaonekwa ine mutsvuku kumashure uye ne zita reSpam, pasina iwe unofanirwa kuita chero chinhu. Ehe hongu, iwe unofanirwa kuzvipa mvumo yekuvharidzira mafoni mukati meZvirongwa> Runhare> Bvisa mafoni, asi kana iwe waita izvo, iwe unogona kukanganwa kuti iwe une icho chakaiswa nekuti iwe uchafarira kunaka kwayo pasina kuita chero chinhu. Iyo inofanirwa-kuve neapp yeanenge chero munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » TrueCaller, dzivisa kunetsa Spam kufona
Iyi purogiramu yakanaka chaizvo! Ndiri kumusoro kwemabhora evaya vanobva kuJazztel, vane gumi nemaviri manhamba akasiyana.
Iyo app inoshanda munyika dzakasiyana kana muSpain chete?
Iyo Portrait Mode yeiyo iPhone 7 Plus ndiyo protagonist yeiyo nyowani Apple chiziviso
Apple inobvisa iyo Finder yeAirpods application kubva kuApp Store